Tag: fifandraisan'ny media sosialy | Martech Zone
Tag: fidirana amin'ny media sosialy
Zoma, Septambra 1, 2017 Alakamisy, Aogositra 31, 2017 Douglas Karr
Ny haino aman-jery sosialy dia mitohy mandroso ho toy ny tambajotra, fihainoana, famoahana, fanampiana ary fampiroboroboana ho an'ny orinasa. Mivoatra ny doka amin'ny haino aman-jery sosialy, manome fomba bebe kokoa sy fikendrena mandroso izay mampihena ny vidin'ny fifandraisan-davitra. Ny sehatry ny fihainoana, ny famaliana, ny famoahana, ny fandrefesana ary ny fanatanterahana fanentanana dia miorina ary manolotra fanomezana be dia be ho an'ny orinasa. Miaraka amin'ny sehatra media sosialy marobe izay misy ankehitriny, dia mora ny misavoritaka na tsy mahazo antoka ny fomba fampandrosoana
39% amin'ireo orinasa no tsy manara-maso ny fampielezan-keviny ara-tsosialy ary mitarika amin'ny fotoana tsy tratrany izany. Hasehoko anao ny fomba hanarahana mombamomba ny tenifototra mandritra ny hetsika, sy ny fomba azonao ampiasaina hananganana fampielezan-kevitra amin'ny ankapobeny. Zavatra roa no hifantohako: Ny metrika manan-danja tokony ho vonona horefesinao rehefa manao fampielezan-kevitra tenifototra Fitaovana tsotra azonao ampiasaina ianao hividianana fomba fijery misimisy kokoa Fomba fampiroboroboana sosialy manan-danja Ny ankamaroan'ny fanentanana ara-tsosialy dia natao
Alakamisy Febroary 25, 2016 Zoma, Febroary 26, 2016 Douglas Karr
Reach7 dia te-hanamora ny fanatombanan'ny olon-tsotra sy ny orinasa ny fivezivezena ara-tsosialy eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny Reach7, ireo mpampiasa dia mamantatra sy mandray anjara amin'ny mpihaino mahaliana indrindra amin'ny media sosialy mora sy mahomby. Ny sehatra ataon'izy ireo dia manampy ny mpampiasa hanangana mpihaino mifandraika amin'ny tsenany eo an-toerana na hiasa am-pahombiazana hifandraisana amin'ny tsena manerantany. Ny orinasa na olon-tsotra dia afaka mametraka ny bitsika amin'ny fiteny 80 mahery amin'ny fiteny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. 90% ny dikanteny vita